Mandarin | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Njirimara bara uru nke beets, egosi na contraindication
Beetroot (ma ọ bụ Burak) bụ ebe obibi nke Amaranth, nke ọma, na nke kwa afọ. Ihe oriri a na-adịghị mma ma dị mma emeela ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọrụ ubi. Banyere ihe uru na nsogbu nke beets maka ahụ, anyị ga-atụle n'isiokwu a. Ihe mejupụtara nke biiti, ihe oriri na-acha uhie uhie bara ezigbo uru. Bekee ahụ na-agụnye carbohydrates: fructose, glucose, sucrose na pectins.
Kedu ka esi eto eto oke n'ulo
Mandarin bịara Europe nanị afọ 170 gara aga site na Italian Italian Michel Tecor. Mkpụrụ ahụ ji aha ya nye ndị China. Ha nwere ike iri naanị ndị ọkwá dị elu nke China - tangerines. Mandarins nke ụdị osisi na ụdị ndị na-eto eto na-adabara maka osisi ime ụlọ. Tụlee ụdị, ụdị mandarins, ụdị ha ma chọpụta ihe ndị bụ isi na njirimara.
Kedu ihe nwere ike ịkụnye tangerines n'ala oghe
Tangerines maka ala na-emeghe bụ mkpụrụ citrus, nke, ma e jiri ya tụnyere oranges, nwere ọtụtụ ọdịiche dị iche iche dịka nha na agba nke mkpụrụ ahụ, ihe isi ike nke nsị nke anụ, uto na ísì ụtọ, oge nhazi. Ndị na-azụ ihe aghaghị imezu ihe ọ bụla a chọrọ n'aka ndị na-eri mkpụrụ osisi a.
Nasturtium - isi iyi vitamin na ogige ubi
Uru nke oregano na nsọ nwanyị. Ezi ntụziaka nke ndị mmadụ maka ụmụ nwanyị
Oke oyibo isi: ozuzu umu n'ulo
Kwesịrị ekwesị kwesịrị ekwesị ma na-elekọta soy
Ngwaọrụ na ntinye nke nsị na ụlọ aka ha aka aka ha
Ihe kachasị mkpa banyere hens
Nkọwa nke ụdị dị iche iche "Vector", bụ nke a ghọtara dị ka ihe na-arụ ọrụ nke ndị na-azụlite Russia
Inye cucumbers na griinye polycarbonate: ihe ichikota na mmiri na otu esi kwadebe ala na akwa ogige?